Madaxweyne Yuusuf oo maanta immaanaya Nayroobi si uu uga sii gudbo Kuwait, Inta badan Xildhibaa reer Puntland ugu jira dowladda federaalka ah oo u ol oleynaya in la ansixiyo qodobka la dagaalanka argagixisada iyo tirada uu madaxweyne Yuusuf ku casumaya shir weynaha dib u heshiisiinta oo lagu sheegay in ay dhan yihiin 3000 oo ruux. Ruunkinet 02/03/07
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la filayaa in uu gowr dhow tago magaalada Nayroobi.
Col. Cabdullahi Yuusuf ayaa la sheegay in uu aadi doono dalka Kuwait si uu uga qeyb galo shir qaar ka tirsan dowlada carabta uga billaabanaya magaalada Kuwait.
Warka ayaa intaasi ku daraya in uu madaxweynaha doonayo in shirkaasi uga dhaadhiciyo wufuudda carabta in la siiyo dhaqaale lagu qabto shir weynaha uu madaweynaha sheegay in la qaban doono 16ka bisha April ee soo socota.
Sidoo kale, warar ku dhow dhow madaxweynaha ayaa tibaaxaya in uu Col. Yuusuf qorsheeyay in tirada ka qeyb galeysa shir weynaha bisha April ee uu sheegay in Soomaali lagu heshiisiin doono lagu koobi doono 3000 oo ruux.
3 kun ayaa la sheegay in laga keeni doono gobollada iyo degmooyinka ayadoo warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaa in shirkaasi ay ka qeyb geli doonaan dad taageersan dowladda oo la soo xulay loona ogolaan doonin in ay shirkaasi ka qeyb galaan dad mucaarad ku ah siyaasadda madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha.
Kulankan ayaa la sheegay in looga soo horjeedo shirweyne ay ku baaqday dowladda Talyaaniga oo ay ku downeysay in kulan ballaaran lagu qabto dalkeeda si loogu sameeyo dib u heshiisiin dhab ah oo ay ka qeyb galayaan mucaarad iyo muxaafad kala duwan.
Dhanka kale, wararka ka immaanaya magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in inta badan xildhibaannada ugu jira reer Puntland dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay si weyn u doonayaan in la ansixiyo qodob si weyn looga dooday oo ku aaddan la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada.
Qodobkan ayaa ku baaqaya in la dilo ama la xiro, hantidiisana lala wareego cidda ay taageerayaasha madaxweynaha ay u arkaan argagixiso.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in qaar badan oo ka tirsan xildhibaanada ayaa la sheegay in ay durbaba diwaankooda ku qoreen qaar ka tirsan ganacsatada reer Muqdisho ay ugu yeeraan argagixiso si hantidooda loola wareego.
Arrintan ayaa dad badani u arkayaan in ay la xiriirto aargoosi aad u fogaaday.